Twitter| Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
नेपालका अधिकाशं सरकारी कार्यलयमा कर्मचारीहरू समयमा नै अफिस आउदैनन् । तर सेवा ग्राही अलिकति ढिलो पुग्दा नागरिकको काम उनीहरूले गर्दैनन । यो विषयमा हेल्लो सरकार को ध्यान जावोस ।।
हामीलाई रेल पनि चाहिदैन्, पानी जहाज पनि चाहिदैन, चाहिन्छ त केवल चामल, दाल र रोटि । अनि गाउँ गाउँका बाटा कालो पत्रे गरिदिए पुग्छ ।
सडकको अवस्था र प्रयोगकर्ताको लापरबार्हीले गर्दा दुर्घटनामा परेर धेरैको ज्यान गइसकेको छ । लेनमा कोहि नबस्ने, अलिकति सोझो र खालि सडक देख्नेबित्तिकै तिब्र गतिमा सवारी चलाउने । अनि कसैले पनि साईडलाईट नबालि र पछाडि पनि नहेरी दायाँ र बायाँ मोडिहाल्ने । यस्को अन्त्य कहिले होला ।
हाम्रो देशमा नेताहरूको तलब भत्ता, पार्टी एकता, कसले कुन मन्त्री बन्ने, कुन सांसदको कार्यकाल कति हुने, कुन मन्त्री राष्ट्रको ढिकुटीबाट रकम उठाई बिदेश भ्रमणमा जान्ने भन्ने जस्ता काम गोला प्रथाबाट टुंगिन समय लाग्दैन । तर, देश र नागरिकको विकासका लागि कहिल्यै कसैले केही गर्दैनन् ।
सबैजनाले आफ्नो मनपरेको टिमलाई समर्थन गरौं । तर अर्काको भाबनामा चोट पुग्ने गरी कुनै टिम र खेलाडिलाई गालि नगरी फुटबल हेराै‌ । र फुटबल हेर्दा हो,हल्ला गरेर अरुलाई असर पर्ने काम नगरौं ।
बाहिर हुँदा महान राष्ट्रवादी हुनेहरु आज त्यहि संसदको रोस्ट्रममा उभिएका छन् । थाहा छैन के बोलिरहेका छन्..., हो ति नै लाई भन्न मन छ बृद्धिदर भनेको के हो ? संसद भनेको के हो ?? सरकार भने के हो ??? नामै लिनुपर्दा नविना लामा जी..??
दिपक ढकाल गोर्खाली
खुसी लाग्यो , हामी आफ्नो देशमा काम गर्न लाज मान्छौ । तर विदेश पुगे पछि चर्पी सफा गर्न पनि पछि परिन्न । स्वदेशमा नै केही गर्नु पर्छ भन्नेलाई सलाम छ ।
दुई पार्टीको संयुक्त सभा र घम्साघम्सी हेर्दा लाग्यो, पार्टी एकता बोलीमै सिमित हुन्छ । यदि एकता भएछ भने पनि दिगो नहोला जस्तो छ । किनकि सबैलाई आफू ठुलो भन्ने घमण्ड छ । जसले जनमत चाहिँ सानो भन्ने नराम्रो संकेत दियो । दुख लागेको छ, जनमतको अपमान हुने लक्षण देखिएकोमा ।
पहिले त कम्रेडहरु, नीति, बिचार, सिद्धान्त, पद, हैसियतमा भन्दा पनि परस्पर सम्बन्ध र आत्मियताको खोजीमा लाग्नुस । तपाइँहरु मनदेखि नै एक अर्कालाई स्विकार्नु हुदैन भने कुनै पनि नीति नियमले तपाईहरुलाई बाध्न सक्दैन । कागजमा भएको एकीकरण भन्दा आत्मामा गरिने एकीकरण सार्थक फलदाई र दिगो हुन्छ ।